Arrin ay ka sinnaayeen dhallinyaradii xalay lagu xasuuqay magaalada Muqdisho | Hadalsame Media
Home Maqaallada Arrin ay ka sinnaayeen dhallinyaradii xalay lagu xasuuqay magaalada Muqdisho
(Muqdisho) 28 Nof 2020 – Yuusuf Garaad ayaa wax ka qoray dhallinyaradii xalay lagu laayey makhaayad ku taalla magaalada Muqdisho isagoo qoraalkiisa ku bilaabay:
Ka dib markii dhaawaca iyo meydka la qaaday ayaan xalay xilli dambe tegey makhayaddii uu qaraxu ka dhacay.
Dadka iyaga oo fiidsanaya la laayay waxay u badnaayeen dhallinyaro uu waalidkood wakhti badan geliyay, iyaguna dadaalay oo isa soo saaray. Waxaa billow u ahaa xilliga ay naftooda, tan waalid iyo walaal iyo dalkooda ay waxtari lahaayeen.
Nn aan iyaga aqoon, iyaguna aanay isaga aqoon, wax dhex marayna aaney jirin ayaa laga dhaadhiciyay in uu isagu horta is dilo si ay iyagu u dhintaan. Wuuna yeelay.
Waxay ila tahay in aan kor isu weydiinno su’aalo culus oo dhab ah. In aan Muhiimadda ay leedahay siinno in bulshadeennu ay ka korto jahliga iyo caddaawaadda dhexdeenna ah, kana billaabato in uu qof kastaa fahmo in ay nafthiisu qiimo leedahay.
Aan u wada duceyno oo Rabbi u barinno in uu dhaawaca bogsiiyo, una naxariisto dadka goobtaas naftooda ku waayay.
Previous articleMadaxii Barnaamijka Nukliyeerka Iiraan oo lagu dhex khaarajiyey caasimadda Tehraan
Next article”Madaxdu wax kasta kama hadlaan!” – Madaxtooyada oo ka aamusan qaraxii xalay ka dhacay Muqdisho xilli aan hay’aadka amaanka looga fadhin inay ka daba tagaan